IBalkans: Yintoni ongayibona kwenye yezona ndawo zingaziwayo emhlabeni | Ukuhamba kwe-Absolut
IBalkans: Yintoni ongayibona kwenye yezona ndawo zingaziwayo emhlabeni
UAlberto Legs | | Croacia, EGrisi
Ujikelezwe ngu IAdriatic, iIonia, iAegean, iMarmara kunye neLwandle oluMnyama, I-Balkan Peninsula igcina ixesha elidlulileyo lembali, imfazwe kunye nenkcubeko namhlanje evelayo kwindawo yeentsomi, ilungele ukulahleka kwiindawo ezingenabantu. Ukusebenza njengomzobo wokuqala wendlela yexesha elizayo, sikukhokela kwi uninzi lweendawo zomlingo zokundwendwela kwiiBalkan.
1 Ipaki yelizwe lamaLwandle e-Plitvice (eCroatia)
2 I-Mostar Bridge (eBosnia naseHerzegovina)
3 IChibi iBled (eSlovenia)
4 Ipaki yeSizwe yaseDurmitor (eMontenegro)
5 I-Ohrid (eMakedoni)
7 IAcropolis (iGrisi)
8 I-Dubrovnik (Croatia)
9 IBuzludhza (Bulgaria)
Ipaki yelizwe lamaLwandle e-Plitvice (eCroatia)
Kucingwa njengenye ye ezona paki zintle zehlabathiIfanelekile enye indlela kwi-Avatar ye-movie, i-Plitvice ikhanya njengokufuneka kulo naluphi na utyelelo kwilizwe laseCroatia. Iseti yeehektare ezingamawaka angama-30 ezixutywe ngamahlathi, iintaba kunye nokulingana Amachibi ali-16 awenziwe nguMlambo iKora ubuninzi bayo butyibilika phakathi kwemithi yepayini kunye neendlela, kubhiyozelwa indalo ethi apha ifumane umlinganiso owahlukileyo.
I-Mostar Bridge (eBosnia naseHerzegovina)
Njengokuba isuka ebalini, iBhulorho yakudala kwisixeko saseHerzegovinia iMostar yenye yezona zinto zinomtsalane kwihlabathi. Ulwandiso lweKota yeNdala, echongiweyo Ilifa lemveli lomntu ngu-unesco ngo-2005, ibhulorho wakhonza njengedonga phezu Umlambo iNeretva phakathi kwale mimandla mibini yesixeko, eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX de yafikelela kwinqanaba lenkcubeko yenkcubeko ngexesha le-Ottoman yelizwe. Iklasikhi yeeBalkan.
IChibi iBled (eSlovenia)
Eyilwe ngo-1991 emva kokuhlukana neYugolasvia, ilizwe laseSlovenia namhlanje likhanya njengenye ye Iindawo ezinokhenketho lwezendalo edume kakhulu eYurophu. Indibaniselwano yezixeko zamaxesha aphakathi (ULjubljana), Iindlela ezinqumla kwiiJulian Alps kunye neendawo ezifanelekileyo ibali labazalwana bakaGrimm, phakathi kwazo iLake Bled emi ngaphandle kwamathandabuzo. Ububanzi bamanzi kwindawo ebalaseleyo esisisiqithi seBled, esichazwe bubukho be Icawa kaMariya, ngesimbo sebaroque kwaye yandulelwa ngamanyathelo angama-99 apho kubhiyozelwa umnyhadala Iintsuku zokopha kunye noBusuku obophayo, ebhiyozelwa ngoJulayi kwaye ibonakaliswe ngamakhandlela angamawaka ali-15 awenziwe ngamaqokobhe amaqanda adada ngaphesheya kwechibi. Umbhiyozo, ngokutsho kwamahemuhemu, ngewawukhuthaze umbono othile kwi-movie yeDisney iTangled.
Ipaki yeSizwe yaseDurmitor (eMontenegro)
Egqunywe ziintaba kwinxalenye enkulu yolwandiso lwayo, iMontenegro ifumana omnye wabameli bayo ababalaseleyo kwiPaki kaZwelonke yeDurmitor. Kukulungele ukungena kwifayile ye- IiAlps zeDinaricIpaki iseti yamachibi, iintaba kunye namahlathi ephayini awele uMlambo iTara, alungele ukuziqhelanisa ukuqhekeza, Ukongeza kuseto lwemiqolomba yomkhenkce phakathi kwayo edumileyo Umqolomba womkhenkce, etyhila incam yobunzima bomkhenkce abambalwa abanobuganga bokungena kuyo. Ubunyani obuchanekileyo kwiiBalkan.
Ifumaneka kunxweme lwe ichibi elikhulu ekwabelwana ngalo neAlbania eselumelwaneni kwaye ichongiwe Ilifa lehlabathi ngu-UNESCO, u-Ohrid yenye yeendlela ze- ezona ndawo zidumileyo eMakedoni. Isixeko esigcwele imbali esichazwe ziindawo ezinjenge-Old Bazaar, indawo yeshishini kunye neevenkile; umthi wamandulo wase China, embindini wesikwere seKrushevska Republika; okanye iBieja City engenakuphikiswa eqoshwe ngelitye apho ubukho be Icawa yaseSan Juan Kaneo, ejonge echibini apho, ngeenyanga zasehlotyeni, abakhenkethi kunye nabantu balapha abonqeni kulala phantsi ukuze batshiswe lilanga.
Idolophu enkulu yeAlbania yenye yezona ndawo zibalaseleyo xa kufikwa ekungeneni kweli lizwe likhethekileyo laseBalkan. Ejikelezwe ziinduli, iintlambo kunye noLwandle iAdriatic, iTirana ijikeleze kuyo ISkanderberg Square, zizele igadi kunye nezakhiwo eziphambili zolawulo lwesi sixeko, ukongeza kwezinye izikhumbuzo ezifana I-Et'hem Bey Mosque, umahluko omsulwa, okanye iPiramidi yaseTirana, okwangoku liziko leenkomfa elinoyilo olwahlukileyo. Isixeko esahlukileyo esinendlela efanelekileyo yokubona ngendlela ye-panoramic indlela yemoto yekhebula ukuya encotsheni yeNtaba iDajt.
Nangona singahlali siyidibanisa ngokuthe ngqo njengenxalenye yeeBalkan, inyani kukuba ilizwe eliyintsomi laseGrisi nalo likwipeninsula eyimbali. Imvelaphi yeziqithi zayo ezidumileyo zamaGrike, iGrisi ifumana kwiAcropolis yaseAthene, ikomkhulu layo, elona phawu libalaseleyo kwilifa lalo. I "Town Upper Town" yakudala namhlanje yindawo enomdla ngokulinganayo apho IParthenon, ekwabizwa ngokuba yiTempile ka-Athena, itsala onke amehlo kwaye ijikelezwe ngamanye amatye ezikhumbuzo afana neTheatre yaseDionysus, indawo apho uSophocles asebenzise intetho yomlomo ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Ukhenketho, ewe. Kodwa nabani na unokumelana neyona ndawo idumileyo kwilizwe laseCroatia. Isixeko esinophahla olubomvu olubheke kwiAdriatic kwaye singqongwe ludonga olukhulu olubumba enye yazo iindawo ezininzi mandulo eYurophu. Kakhulu kangangokuba inxenye yebango lakho langoku isekwe kwimeko yakho njengoko Indawo yokufota kwindawo yomdlalo weTrones iziqendu kunye nemifanekiso evela kwi-trilogy entsha ye-Star Wars. Iimpawu zecinematic zesixeko esidibanisa undwendwe ngamandla amakhulu eCroatia kwaye, kutheni kungenjalo, nezinye iilwandle zesiqithi ezijikeleze isixeko zimema ukuba zithathe idiphu emva kwembali.
Ikwabizwa ngokuba yi UFO waseBulgariaIBuzludhza sisakhiwo esibi esigutyungelwe yinkungu esasisebenza njengendawo yemithendeleko yamagosa aphezulu obuKomanisi eBulgaria. Indawo efanelekileyo yee-X-Files emiswe encotsheni yentaba iBuzludzha ethintelwe ukufikelela kuyo ayikhuphi kutyelelo lwendawo leyo, apho phezulu, ukuqiniseka ukuba abaphambukeli bafike kwiiBalkan ngaxa lithile kuyeyona nto inokuthenjwa.
Njengokuba ubona, iibalkans baseta imephu yezinto ezinomtsalane phakathi kwabo zokufumana iidolophu ezinomtsalane, iipaki zikazwelonke zokuphupha, izikhumbuzo zamabali kunye nedike elifanelekileyo kwifilimu yoopopayi yeDisney.
Ngaba ukhe wazindwendwela ezi ndawo kwezi zeBalkan?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » IBalkans: Yintoni ongayibona kwenye yezona ndawo zingaziwayo emhlabeni